ဥစ္စာစောင့်တွေရှိတဲ့ တောင် | AnZarTone
by AnZarTone ဥစ္စာစောင့်တွေရှိတဲ့ တောင်
ကျနော်တို့ရွာမှာ ၉ ခုစီရှိတဲ့ အရာတွေရှိပါတယ်။ အဲဒါတွေကတော့ တောင်ကိုးလုံး၊ စမ်းကိုးတွင်း၊ မန်ကျည်းကိုးပင် တွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ တောင်ကိုးလုံးထဲမှာ အမြင့်ဆုံးဖြစ်တဲ့ တောင်ကတော့ ကျောက်ပုထိုး တောင်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျောက်ပုထိုးတောင်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပါးစပ်ရာဇဝင်တွေကတော့ မြောက်မြားစွာပါပဲ။အပြောအများဆုံးကတော့ အဲဒီ ကျောက်ပုထိုးတောင်မှာ ဥစ္စာစောင့်တွေ ရှိတဲ့အကြောင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
တောင်ပေါ်က ထုံးဖြူဖြူ စေတီ
ဥစ္စာစောင့်တွေနဲ့ မျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ တွေ့ခဲ့၊ ကြုံခဲ့ရတယ် ဆိုတဲ့ လူတွေရဲ့ အကြောင်း၊ ဥစ္စာစောင့်တွေက နေရာ လဲဖို့ဆိုပြီး ခေါ်တယ်ဆိုတဲ့ လူတွေရဲ့ အကြောင်း စသည်ဖြင့် အများကြီးပါပဲ။ ကျောက်ပုထိုး တောင်ပေါ်ကို တက်ရင် မပြုလုပ်ရမယ့် စည်းကမ်းချက်တွေ ရှိပါတယ်။ အဲဒါတွေကတော့ တံတွေး မထွေးရ၊ မဆဲမဆိုရ၊ အညစ်အကြေး မစွန့်ရ ဆိုတာတွေ ပါပဲ။
အကယ်၍များ ဒါတွေ ပြုလုပ်မိလို့ရှိရင်ဖြင့် အကြီးအကျယ် ဖျားနာခြင်းမှအစ အသက် သေဆုံးသည်အထိ ဖြစ်တတ်တယ်လို့ ပြောကြပါတယ်။ သို့ပေသိ တစ်ခါတစ်ရံတွင်မတော့ ဒါတွေ ပြုလုပ်မိလို့ရှိရင် သတိပေးတဲ့ အနေနဲ့ မြွေကြီးများအသွင်သဏ္ဍာန် ပြသတတ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဥပမာအနေနဲ့ ကျနော့်ညီ တစ်ဝမ်းကွဲရဲ့ အဖြစ်ကို ပြောရရင် – သူက တောင်ကိုးလုံးမှာ အပါအဝင်ဖြစ်တဲ့ ကျောက်တုံးကြီး တစ်လုံးပေါ်မှာ ဆော့ကစားရင်းနဲ့ အဲဒီ ကျောက်တုံးကြီးပေါ်မှာ အညစ်အကြေး စွန့်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီနေ့ ညလည်း ရောက်ရော ဖျားပါလေရော။
ဆေးသောက်၊ ဆေးထိုး လုပ်ပေမယ့် သူ့အဖျားက မကျသွားတဲ့အပြင် ပိုလို့တောင် ဆိုးလာခဲ့ပါတယ်။ အပူတွေ များလွန်းလို့ မျက်လုံးတောင် ဖွင့်မရတဲ့ အခြေအနေထိပါပဲ။ အဲဒီအခါ အမေဖြစ်သူက အဲဒီနေ့က ဘာတွေ လုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကို စုံစမ်းလိုက်တော့ တောင်ပေါ်မှာ အညစ်အကြေး စွန့်ခဲ့တာကို သိသွားပါတယ်။ ဒါနဲ့ အဲဒီ တောင်ဆီသွားပြီး တောင်းပန်သမှု ပြုခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီနောက်မှ အဖျားက ချက်ချင်းဆိုသလို ကျသွားပြီး သက်သာရာ ရခဲ့ပါတယ်။
ကျောက်ပုထိုးတောင်မှာ ဂူပေါက်တစ်ခုလည်း ရှိပါတယ်။ လူကြီးတွေရဲ့ ပါးစပ်ရာဇဝင်အရ အရင်တုန်းက ပွဲလန်းသဘင်ရှိပြီဆို အဲဒီဂူပေါက်ဆီသွားပြီး ဥစ္စာစောင့်တွေဆီက ရွှေ၊ ငွေ၊ လက်ဝတ်ရတနာတွေ ငှားရမ်းလို့ ရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာ အချို့အချို့သော အကျင့်မကောင်းသူများရဲ့ အကျင့်ကြောင့်၊ တစ်နည်းအားဖြင့် ငှားပြီး ပြန်မပေးတတ်သည့် အကျင့်ကြောင့် မငှားကြတော့ဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။
ပြီးတော့ ဂူနဲ့ ပတ်သက်လို့ နောက်ပိုင်းခေတ်မှာ ရွာထဲက လူတွေက စူးစမ်းခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ ဂူဘယ်လောက် ပေါက်သလဲဆိုတာ သိရအောင်လို့ အပ်ချည်ကြိုးကို အသုံးပြုပြီး ဂူထဲဝင်သွားတာ အပ်ချည်ကြိုး ဆုံးတဲ့ထိအောင် ဂူက မဆုံးသေးဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။ အဲဒီဂူထဲမှာ ဘာတွေ တွေ့လဲဆိုတာတော့ မသိရပါဘူး။ ဒါကတော့ ဥစ္စာစောင့်တွေ ရှိတယ်ဆိုတဲ့ ကျနော်တို့ရွာက ကျောက်ပုထိုး အမည်ရတဲ့ တောင်နဲ့ သူ့ရဲ့ ဂူပေါက် အကြောင်းများပါပဲ။
မှတ်ချက် ။ ။ ဂန်ထရီ ဥူးဦးထုပ် ၏ ခရီးသွားတောလားမှ ….
This entry was posted in ကိုယ်တိုင်ရေး စာနှင့် ကဗျာများ and tagged ခရီးသွား. Bookmark the permalink.
← ည ….. သည်	မြန်မာဂျာနယ် ဝက်ဘ်ဆိုက် အချို့ →